Ukubuyiselwa Kwezokuvakasha KweDominican Kungamanga? Indida kaSimpson Ibheka Iqiniso
Ikhaya » Izindaba Zamuva » Izindaba Ezintsha » Izindaba zeDominican Republic » Ukubuyiselwa Kwezokuvakasha KweDominican Kungamanga? Indida kaSimpson Ibheka Iqiniso
Izindaba Ezintsha • Izindaba Ezintsha Zokuhamba • I-Caribbean • Izindaba zeDominican Republic • Industry Hospitality Industry • Izindaba • Ukwakha kabusha • Ezokuvakasha • Ukuvuselelwa Kwendawo Yokuhamba • ezithrendayo Manje
Umthelela wobhadane kwezokuvakasha emhlabeni wonke futhi ngenxa yalokho emnothweni womhlaba ube mkhulu kakhulu. Umnikelo wezokuvakasha kuMkhiqizo weGlobal Gross World ngo-2020 - $ 4.7 trillion - wawucishe ube uhhafu walowo ka 2019. Ephepheni lakamuva, umqondisi jikelele ophethe iNgqungquthela Yezizwe Yezokuhweba Nokuthuthukiswa (UNCTAD) ulinganisela ukuthi isimo sethemba, ekupheleni konyaka, sizoba ngama-60% ngaphansi kuka-2019.
Njengoba ezokuvakasha ziyinto ebalulekile emnothweni womhlaba, ukuvuselelwa kuwo wonke amazwe kubalulekile.
Muva nje uMnyango Wezokuvakasha waseDominican wethule imininingwane ekhombisa ukuthi lo mkhakha uthola ukwelulama okumangalisayo.
Ngenkathi imininingwane ilungile, ukutolikwa kungashiya umuntu ebuza inkomba yalokho kululama.
Ukubuyiselwa esimeni kuwumgomo wawo wonke amazwe, ngoba ezokuvakasha ziyinto ebaluleke kakhulu emnothweni womhlaba, kepha ikakhulukazi kulawo anokuvakasha njengengxenye ebalulekile yomnotho.
Emavikini ambalwa edlule, UMnyango Wezokuvakasha WaseDominican wethule imininingwane ezokhombisa ukuvuselelwa okucacile nokumangazayo kwezokuvakasha ezingenayo zaseDominican. Imininingwane ilungile, kepha ukutolikwa kwayo kudinga ukuhlaziywa okufaka izibani zobufakazi nezithunzi zalokhu kutakula, ngokuya ngemininingwane yomhlaba ehlanganisa idatha engaphelele yezimpawu ezahlukahlukene.
Sekuyiminyaka engamashumi ayisihlanu kufundwa umthelela okwathi empeleni waqashelwa eminyakeni engaphezu kwekhulu eyedlule, impicabadala kaSimpson. Iziphetho ezingamanga zingafinyelelwa lapho izibalo zihlanganisa idatha engeyona eyokufana. Ngaphandle kokufaka imininingwane yale mbono yezibalo, siyabona ukuthi ivumela ukuqonda eminye imikhawulo yokuchazwa kwedatha nguMnyango Wezokuvakasha waseDominican, idatha, okuyiqiniso kwayo, esikuphindayo ukugwema ukungaqondi, akubuzwa.
Ukubaluleka kokuqonda le mingcele akudingi kuthethelelwa ezweni lapho, ngo-2019, ngendlela yokuthola imali yamazwe angaphandle, ezokuvakasha zinikele ngo-8.4% kwi-GDP, emele ama-36.4% wokuthunyelwa kwempahla nezinsizakalo kwamanye amazwe. Ngaphezu kwalokho, ezokuvakasha, ngaphandle kokugoba okungu-13% uma kuqhathaniswa nonyaka we-2018, zanikela ngo-2019 cishe ku-30% Wokutshalwa Kwezimali Okuqondile Kwangaphandle.
Ngalezi zizathu, ukuqinisekiswa ngokucophelela kwesitatimende sokuthi eDominican Republic, umkhakha wezokuvakasha uyishiya ngemuva inkinga ebangelwe ubhadane lwe-COVID-19 ibaluleke kakhulu kuzinqubomgomo zomphakathi zezwe, kanye nokuhola izinqumo zezomnotho ezincane zabasebenza kulo mkhakha.
Masikhumbule imininingwane esemqoka ekhonjwe nguMnyango:
- Ukufika kwabantu abangahlali ngendiza, ngo-Agasti nonyaka, bamele ama-96% alabo abaku-2019, umkhuba ongaphezulu kokuqinisekiswa ngokwenzeka engxenyeni yokuqala kaSepthemba.
- Lo mkhuba uqinisekiswa ukuhlaziywa kwanyanga zonke kokutholwa kwalesi sikhombisi selokhu kwalulama. uma kuqhathaniswa no-2019, ibilokhu ikhula, isuka kuma-34% ngoJanuwari kuya kuFebhuwari, yaya cishe ku-50% ngoMashi-Ephreli, yacishe yaya kuma-80% ngoMeyi-Juni naku-95% ngoJulayi nango-Agasti.
- Ukufika kwezakhamizi ezingezona ezeDominican sekukhule kancane izinyanga eziyishumi.
- Amaphesenti abavakashi abahlala emahhotela angama-73%.
Le yonke idatha eyiqiniso futhi ebhaliwe. Kodwa-ke, uSimpson usikhumbuza ukuthi babhekisa kumasampula ahlanganisa amaqembu ahlukene nezikhathi ezahlukahlukene.
Ukuhlaziywa konke kwesikhathi bekungaba okulungile ukube kube nozinzo ekufikeni ezingeni lenyanga esikhathini esikhethelwe ukuqhathanisa. Kwakungenjalo, futhi nezinyanga zika-2019 azilingani nokuqhathanisa okunjalo nonyaka ka-2021. Ngalowo nyaka, abezokuvakasha bathinta ngesandla imiphumela yokufa kwabavakashi abathile phakathi kukaMeyi noJuni, okwabuyisela emuva ukukhula kwezokuvakasha eNyakatho Melika okurekhodiwe. engxenyeni yokuqala yonyaka (cishe u-10%) kwehle ngo-3% ezinyangeni eziyishumi zokuqala (4% uma kubhekwa inani labantu abafikile bangaphandle).
Lokhu kudinga ukwehlukanisa ukuthi kungakanani lokho okungu-96% ngo-Agasti noma okungaphezulu kuka-110% emasontweni amabili okuqala ale nyanga kungenxa yokutholwa kwenombolo (abafikayo abangama-2021) nokuthi kunciphe kangakanani ukwehla kwenani (i-2019 kufika).
Lo mphumela unesisindo ikakhulukazi uma abafikayo behlukaniswa ngokuya ngesinye isici se-inhomogeneity, behlukanisa labo abangewona abahlali baseDominican kulabo abavela kwamanye amazwe.
Lokhu sikwenza etafuleni elilandelayo lapho sethula khona lokhu idatha, yezinyanga zikaJanuwari-Agasti, eziqala ngo-2013.
Le mininingwane, ngaphandle kokungabaza ukuqhathaniswa koMnyango ngenyanga ka-Agasti, iyayishintsha, njengoba kunikezwe ukuthi esikhathini esiyizinyanga eziyisishiyagalombili, ukufika okuphelele kungama-60% walabo baka-2019 futhi kufanele sibuyele emuva ku-2013 ukuthola isibalo esiphansi . Lokhu kuqhathanisa kokugcina kubhekisele kwimininingwane yonke, kepha ukube besingagxila kuleyo yabokufika bodwa, lokhu kunganikeza ama-53%, kuqhathaniswa ne-2019, ne-72%, kuqhathaniswa ne-2013.
Ukucatshangelwa kwabangaphandle abangahlali kubalulekile ngoba abahlali baseDominican abangahlali mhlawumbe basebenzise kancane izinsizakalo ezingeziwe njengamahhotela, izindawo zokudlela, ezokuhamba. Lokhu kubukwa okungekho okuthakazelisa kakhulu kusekelwa ukuhlala kwamahhotela, okuthi, yize kungabokufika ama-86% alabo abavunyelwe, angaphansi kwalesi samba, kanti ngokomlando amaphesenti amabili ayevame ukuba ngohlelo olufanayo.
Kukhona enye idatha engahlangene neyodwa ehlobene nezokuvakasha ezingenayo okufanele ikhathaze. Le datha, eyethulwe etafuleni elilandelayo, ibhekisa ekuwohlokeni kwabafika ngesifunda esidabuka kwabangewona abahlali.
Unyaka i-America esenyakatho Europe i-South America America Central
Imininingwane efanelekile ekubonisweni kwethu ukukhula kwezokuvakasha eNyakatho Melika okuhambisana nokwehla kwalokho okuvela eYurophu. Uma le datha ibhekwa kanye naleyo ehlobene nobuzwe, nomphumela ongaqondile esike saphawula ngawo, kubukeka sengathi umthelela omubi wokwehla kwezokuvakasha zaseYurophu awunakunxeshezelwa ngokwanda kwezokuvakasha eNyakatho Melika.
Lesi sibikezelo sisekelwa futhi nemininingwane yaseYurophu mayelana nokutholwa kwethrafikhi yomoya yaseYurophu. Ukuqhathanisa phakathi kwaleli hlobo neminyaka edlule kukhombisa ukuthi kutholakale kuphela u-40% wethrafikhi yango-2019, ngokuthuthuka okuqhathaniswa no-2020, lapho ukutakula kwakungu-27%. Futhi kufanele kungezwe ukuthi ukuhamba kwezindiza akuyona inkomba ehambisanayo, ngoba eYurophu kube nokululama okuncane kwezimoto okufanele zithande iningi leDominican Republic, lelo lezindiza eziya kwamanye amazwe. Eqinisweni, lezo ezitholakale ikakhulukazi kwakuyizindiza ezingabizi kakhulu zase-Europe. Namuhla, zimele inani eliphelele elingu-71.4%, kanti eminyakeni emibili edlule bebemele ama-57.1% kuphela, futhi akufanele kunganakwa ukuthi izindawo ezifaka isandla kakhulu kulo mphumela, ngandlela thile, zimelela ezinye izindlela zokunikezwa kwabavakashi baseCaribbean.
Kulokhu kumele engeze ukuthi izindlela ze-European Green Pass azithandi ezokuvakasha eYurophu ngoba umuthi wokugoma osetshenziswa kakhulu eDominican Republic, iSinovac ayikuvumeli ukuthola iGreen Pass. Lokhu kungangabazeka, kepha ngokuqinisekile kuthinta umkhakha wenhlangano yezokuvakasha, ukuze isithombe esivelayo kube ukuthi kusekude phambili ngaphambi kokuthi ezokuvakasha zaseDominican zibuyele emazingeni alo angaphambi kobhadane.
Ukuthembela ekutholakaleni kwesimo sangaphambi kobhadane ngenxa yokulawulwa kwalolu bhubhane mhlawumbe kunethemba, futhi noma kunjalo, akubonakali ngathi kungenzeka esikhathini esifushane.
Lokhu kusho ukuthi, ngaphandle kokunikeza ukubaluleka okukhulu ekuthuthukisweni kwamaphoyinti ambalwa wamadesimali kulawa maphesenti, kuyadingeka ukuthi ucabange ngezinqubomgomo zokwenza kabusha ukusebenza kubheke phakathi nonyaka ka-2023.
Umbiko wakamuva woMkhandlu Wezwe Wokuvakasha Nezokuvakasha ukhuthaza izenzo zohulumeni, njengokufaka imali nokuheha utshalomali lomkhakha ozimele kwingqalasizinda ephathekayo kanye neyedijithali nokukhuthaza izingxenye ezithile zokuhamba, njengokuvakasha kwezokwelapha noma ezokuvakasha ze-MICE. Lokhu kusho inqubomgomo yomhlaba wonke, engeyona eyomkhakha ebandakanya neminye imikhakha yomphakathi.
Ukucatshangelwa okufanayo kwenziwa ezinyangeni ezimbili ezedlule nguMqondisi Jikelele ophethe i-UNCTAD, egcizelela isidingo sokucabanga kabusha imodeli yokuthuthukisa ezokuvakasha, ukukhuthaza ezokuvakasha zikazwelonke nezasemakhaya, kanye nokwenza i-digitalize.
Ingqalasizinda ekhona ezweni ivumela lezi zenzo, futhi lokhu kudinga inqubomgomo eqinile yokwenyusa, eqondiswa nezinkampani ezizimele, ngaphandle kokwaneliseka ngeqiniso lokuthi ukuvuselelwa okuthile kuyenzeka. Iqiniso lokuthi ekupheleni kwalo nyaka bekukhona abafika ezigidini ezingama-4.5 noma ezigidini ezinhlanu, namanje okuncane uma kuqhathaniswa neminyaka eyedlule, ngeke lenze umehluko omkhulu, ngaphandle uma kudalelwa izimo zokuvuselela lo mkhakha, ozovumela izwe igcine isikhundla sayo sokuhola kwezokuvakasha zaseCaribbean.